လိမ္မော်သီးရောင်းပြီး ရွာမှာ စာသင်ကျောင်းတွေဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား(ရုပ်သံ) – Maythadin
ဆင်းရဲရင်လက်အောက်ခံနိုင်ငံဘဝ_ရောက်တတ်ပါတယ်_ပညာရေးဟာနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပါပဲ။စာသင်ကျောင်းလှူတယ်ဆိုတာ_နိုင်ငံရဲ့အနာဂါတ်အတွက်ပါပဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာနာတာကာ ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ အသက်(၆၈) နှစ်အရွယ် ???????? ??????? ဟာ လိမ္မော်သီးရောင်းပြီး ဘဝကိုရပ်တည်နေတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
???????? ဟာ ????????? ဆိပ်ကမ်းမြို့အနီး Newpadapu ရွာလေးမှာနေထိုင်ပြီး ဝင်ငွေထွက်ငွေမျှတအောင်ပြု လုပ်ဖို့အတွက် မြို့ပေါ်တက်ပြီးလိမ္မော်သီးရောင်းချတဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ရက်မှာတော့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားစုံတွဲတစ်တွဲက ???????? ဆီကနေ လိမ္မော်သီးတစ်လုံးဘယ်လောက်လဲလို့ အင်္ဂလိပ်လိုမေးတဲ့ အခါမှာ ???????? အနေနဲ့
ရွာမှာ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှမရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ???????? ရွာမှာ ကျောင်းဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံကိုကြိုးစားရှာခဲ့ပါတယ်။ မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက် သူဟာ လိမ္မော်သီးရောင်းရငွေထဲမှ တစ်နေ့ကို ရူပီး(၁၅၀)စုခဲ့ပါတယ်။(၂၀၀၀)ခုနှစ်မှာတော့ သူဟာ မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့
ပိုက်ဆံကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကတည်းက ကလေးတွေဟာ ကျောင်းကိုစတင်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် ကျောင်းသားဦးရေ ပိုများလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ချေးငွေထုတ်ချေးပြီး ကျောင်းတည်ဆောက် မယ့် မြေကိုဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ???? သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေ၊ အာဏာပိုင်တွေဆီကနေ ထောက်ပံ့ကြေးတစ်ခုမှမယူပဲ မူလတန်းကျောင်း
တစ်ကျောင်းကို သူ့ရဲ့အင်အား နဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပရဟိတအဖွဲ့အနည်းငယ်ဆီကနေ ထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံခဲ့ပါ တယ်။အဲ့ဒီနောက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေဖို့အတွက် နေ့ရောညပါအလုပ်လုပ်ပြီးနောက် နောက်ဆုံးမှာတော့ ???????? ဟာ အသက်(၁၀)နှစ်ကနေ(၁၄)နှစ်အတွင်းရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကို
ထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ???????? ဟာ ကျောင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကို တတ်နိုင်သမျှ သူ့တစ်ယောက်တည်းရဲ့အင်အားနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုကိုယ်ကျိုးမကြည့်ပဲလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လည်း (၇၁)ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားနေ့မတိုင်ခင်မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကဖုန်းတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲတာကတော့ သူ့ကို ????? ???? ဆုချီးမြှင့် ခံရကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနကအကြောင်းကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆုဟာ အိန္ဒိယအစိုးရကပေးတဲ့ အမြင့်ဆုံးအရပ်ဘက်ဆုပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကို ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ ကောလိပ်တက်ခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုခဲ့သလို ကောလိပ်ကျောင်းဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့လည်း ပိုက်ဆံတွေကိုစတင်စုဆောင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ ???????? ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဆငျးရဲရငျလကျအောကျခံနိုငျငံဘဝ_ရောကျတတျပါတယျ_ပညာရေးဟာနိုငျငံရဲ့ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုပါပဲ။စာသငျကြောငျးလှူတယျဆိုတာ_နိုငျငံရဲ့အနာဂါတျအတှကျပါပဲ။အိန်ဒိယနိုငျငံ ကာနာတာကာ ပွညျနယျမှာနထေိုငျတဲ့ အသကျ(၆၈) နှဈအရှယျ ???????? ??????? ဟာ လိမ်မျောသီးရောငျးပွီး ဘဝကိုရပျတညျနတေဲ့သူတဈဦးဖွဈပါတယျ။
???????? ဟာ ????????? ဆိပျကမျးမွို့အနီး Newpadapu ရှာလေးမှာနထေိုငျပွီး ဝငျငှထှေကျငှမြှေတအောငျပွု လုပျဖို့အတှကျ မွို့ပျေါတကျပွီးလိမ်မျောသီးရောငျးခတြဲ့သူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။တဈရကျမှာတော့ နိုငျငံခွားသားခရီးသှားစုံတှဲတဈတှဲက ???????? ဆီကနေ လိမ်မျောသီးတဈလုံးဘယျလောကျလဲလို့ အင်ျဂလိပျလိုမေးတဲ့ အခါမှာ ???????? အနနေဲ့
ရှာမှာ ကြောငျးတဈကြောငျးမှမရှိတာပဲဖွဈပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့ ???????? ရှာမှာ ကြောငျးဆောကျလုပျဖို့အတှကျ ပိုကျဆံကိုကွိုးစားရှာခဲ့ပါတယျ။ မူလတနျးကြောငျးတဈကြောငျးဖှငျ့လှဈနိုငျဖို့အတှကျ သူဟာ လိမ်မျောသီးရောငျးရငှထေဲမှ တဈနကေို့ ရူပီး(၁၅၀)စုခဲ့ပါတယျ။(၂၀၀၀)ခုနှဈမှာတော့ သူဟာ မူလတနျးကြောငျးတဈကြောငျးကိုတညျဆောကျနိုငျဖို့ လုံလောကျတဲ့
ပိုကျဆံကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီကတညျးက ကလေးတှဟော ကြောငျးကိုစတငျတကျရောကျနိုငျခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ ကြောငျးသားဦးရေ ပိုမြားလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ခြေးငှထေုတျခြေးပွီး ကြောငျးတညျဆောကျ မယျ့ မွကေိုဝယျယူခဲ့တာဖွဈတယျလို့ ???? သတငျးဌာနကဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ဒသေခံတှေ၊ အာဏာပိုငျတှဆေီကနေ ထောကျပံ့ကွေးတဈခုမှမယူပဲ မူလတနျးကြောငျး
တဈကြောငျးကို သူ့ရဲ့အငျအား နဲ့တညျဆောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ ပရဟိတအဖှဲ့အနညျးငယျဆီကနေ ထောကျပံ့မှုကိုလကျခံခဲ့ပါ တယျ။အဲ့ဒီနောကျ ရနျပုံငှရှောဖှဖေို့အတှကျ နရေ့ောညပါအလုပျလုပျပွီးနောကျ နောကျဆုံးမှာတော့ ???????? ဟာ အသကျ(၁၀)နှဈကနေ(၁၄)နှဈအတှငျးရှိတဲ့ကြောငျးသားတှအေတှကျ အထကျတနျးကြောငျးတဈကြောငျးကို
ထပျမံဖှငျ့လှဈနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ???????? ဟာ ကြောငျးအတှကျ လိုအပျတဲ့အရာအားလုံးကို တတျနိုငျသမြှ သူ့တဈယောကျတညျးရဲ့အငျအားနဲ့ လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့လိုကိုယျကြိုးမကွညျ့ပဲလုပျဆောငျခဲ့လို့လညျး (၇၁)ကွိမျမွောကျ အမြိုးသားနမေ့တိုငျခငျမှာ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနကဖုနျးတဈခုကိုလကျခံရရှိခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အဲတာကတော့ သူ့ကို ????? ???? ဆုခြီးမွှငျ့ ခံရကွောငျး ဝနျကွီးဌာနကအကွောငျးကွားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။အဆိုပါဆုဟာ အိန်ဒိယအစိုးရကပေးတဲ့ အမွငျ့ဆုံးအရပျဘကျဆုပဲဖွဈပါတယျ။အစိုးရကို ကြှနျတျောတို့ရှာမှာ ကောလိပျတကျခှငျ့ရဖို့တောငျးဆိုခဲ့သလို ကောလိပျကြောငျးဆောကျလုပျနိုငျဖို့လညျး ပိုကျဆံတှကေိုစတငျစုဆောငျးနပွေီဖွဈတယျလို့ ???????? ကပွောပွခဲ့ပါတယျ။